Global Voices teny Malagasy » Tetikasa seranantsambo vaovao tarihan’i Shina ao Pero, miatrika ny fanoheran’ny mponina sy ireo mpiaro tontolo iainana any an-toerana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Marsa 2021 12:20 GMT 1	 · Mpanoratra Isolda Morillo Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Latina, Però, Shina, Fampandrosoana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Sendikà, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana
Hetsipanoherana tamin'ny 2019 nanoherana ny fanitarana ilay seranantsambo. Sary an'i Miriam Arce, fampiasàna nahazoana alàlana.
Fampitandremana alefan'ireo fikambanana sivily peroviàna ny momba izay ho fiantraika ara-pahasalamana ho an'ny olombelona sy ara-tontolo iainana mety hoateraky ny fananganana ilay Seranantsambo Goavana Afaka Mandray Asa Maro Karazana ao Chancay, tetikasa iray eo ambany fitarihan'ilay orinasa shinoa COSCO sy ilay orinasa peroviàna mpanao fandavahana, Volcan Compañía Minera.
Tanjon'ny  COSCO ny hanao ny seranantsambo ao Chancay ho “ambohipihaonana any Amerika Atsimo ary ho vavahady iray mankany Pasifika,” ilay seranantsambo rahateo 58 km ao avaratr'i Lima, renivohitry ny politika sy ny fandraharahàna ao Pero. Nambaran'ireo  manampahefana avy ao amin'ny seranatsambon'i Chancay fa hiteraka asa mihoatra ny 9.000 ilay tetikasa, 90 isanjato amin'izany dia ho an'ireo mponina ao an-toerana.
Tamin'ny 2019 ny filoha peroviàna teo aloha, Martín Vizcarra, dia nilaza fa , miaraka amin'io tetikasa io, andrasana hanome “iray amin'ireo tolotra tsara indrindra manerana an'i Amerika Atsimo” ny fireneny.
Tany am-piandohan'ny 2019, azon'ny COSCO ny 60 isanjato tamin'ny fampiasambolan'ny Volcan ho an'ilay seranantsambo ao Chancay, izay mitentina 225 tapitrisa dolara amerikàna , araka ny voalazan'ny masoivohom-baovaom-panjakana shinoa Xinhua sy China Daily . Io ankehitriny no tetikasa seranantsambo voalohany indrindra eo ambany fitantanan'ny COSCO any Amerika Atsimo. Antenaina hanomboka amin'ny 2023 ny asan'ilay seranantsambo, ka tafiditra amin'izany ny fisian'ireo toeram-pitodiana afaka mandray asa maro kazarana, ny toerana natao hitobian'ireo ‘containers’ ary fotodrafitrasa mifandraika amin'izany, rafitra novinaina ho afaka mandray iray tapitrisa TEU isantaona. Hahatonga azy ho seranana salantsalany izany , izay heverina ho toy ny efa dingana goavana ao amin'ny faritra.
Taorian'ireo andiana hetsipanoherana nanomboka tamin'ny 2019, notakian'ireo mpikatroka sy mponina ao an-toerana tamin'ny Aogositra 2020 ny hanovàna ilay drafitra fanorenana. Volana vitsivitsy taorian'izay, nanolotra fanovàna vitsivitsy ny COSCO sy ny Volcan. Kanefa, na teo aza ny kiana tsy nitsahatra, tamin'ny Desambra 2020 dia neken'ireo manampahefana tao Pero ihany ilay fanorenana. Rehefa nahazo alàlana, mbola hampiasa vola 1,3 lavitrisa dolara amerikàna ny COSCO mba hahatontosa tsara ny dingana voalohany amin'ilay tetikasa – ny Aprily amin'ity taona ity no tokony hanomboka ny asa fanorenana.
Eo an-tànan'ny tatitra diso hoe ny ain'ny natiora?
Hetsipanoherana avy lavitra, nanajàna ny elanelana sôsialy tamin'ny 2020. Sary an'i Miriam Arce, fampiasàna nahazoana alàlana
Manamafy ireo fikambanana ao an-toerana fa mba hanafina ny halehiben'ny fiantraika mampididoza aterak'ilay seranantsambo vaovao, dia nokaramain'ny COSCO sy ny Volcan ny orinasa iray fakàn-kevitra.
Iray amin'ireo firenena tena manankarena amin'ny hamaroam-piainana  eto an-tany i Pero. Ireto ny vitsivitsy amin'ireo fanamarihana 50  tamin'ny 2020 nataon'ny Mundo Azul, ONG iray ao an-toerana izay nanao jeritodika ireo antontan-kevitra momba ny fiantraika ara-tontolo iainana natolotry ny COSCO sy ny Volcan ho an'ireo manampahefana peroviàna misahana ny tontolo iainana : ny fiantrakany amin'ireo faritra mando, famoahana betsaka ny entona mandoto feno poizina, ny fandotoana ara-peo, ny fahapotehan'ny morontsiraka, ny ho fahamaroan'ny fahafatesan'ireo zavamaniry sy biby ao amin'ilay faritra.
Stefan Austermühle, biolojista sady tale mpanatanteraka ao amin'ny Mundo Azul, manamafy fa ny tombana ara-tontolo iainana natolotry ny COSCO sy ny Volcan dia miaty torohay tsy feno ary mbola azo iadian-kevitra.
“Afenin'ilay tombana momba ny fiantraika ara-tontolo iainana ny tena fiantraikany marina, ary tsy tokony nankatoavin'ny governemanta amin'izao endriny ankehitriny izao,” hoy i Austermühle tamin'ny Global Voices. “Kanefa, rehefa jerena ny toerana misy ny governemanta sy ny fandresendahatra pôlitika ary ny tsindry ataon'ireo mpampiasa vola amin'ilay tetikasa, sahala amin'ny kely ihany ny fianoana hoe hihaino ny fanehoankevitsika ny governemanta.” Ilay tetikasa, hoy izy, dia hiafara amina fiantraika henjana amin'ny tontolo iainana ary hiantraika amin'ny fahasalaman'ireo mponina ao an-toerana.
Mila fandavahana lalina any anaty tany ny fanorenna ireo toeram-pitodiana, izay hanova ny fikorianan'ny rano ao an-dranomasina sy ny zotran'ireo onja, hisy fiantraikany amin'ny zavamaniry anaty ranomasina ary hiafara amin'ny fahafatesana faobe ho an'ireo karazan-javatra ambany ranomasina, mandritra ny dingana fanorenana, hoy ny nambaran'i Austermühle. Hisy fiantraikany  ihany koa io amin'ny rafi-piainana natoraly ao anatin'ny faritra mando ao Santa Rosa tsy lavitra azy eo, toerana iray manandanja sy ivon'ny fahamaroam-piainana ao amin'ny faritra.
Matahotra famindràn-toerana ny mponina ao an-toerana
Sarin'ny hetsipanoherana tamin'ny 2019, avy amin'i Miriam Arce, fampiasàna nahazoana alàlana
Hamafisin'ireo mponina ao an-toerana fa hisy fiantraikany amin'ny tranon-dry zareo izay miteronterona eny ambonin'ireo harambato manodidina ny fahasimbàna goavana eo amin'ilay toerana. Mbola mijanona tsy misy valiny, anefa, ny fanontanian-dry zareo.
“Tsy mbola nisy mihitsy antoka nomena anay hoe hahazo onitra ara-bola sa tsia ireo mponina sy ireo tompon-tanàana ao anatin'io faritra io raha sanatria misy fahasimbana ampahany na manontolo ateraky ny fiantraikan'ilay tetikasa,” hoy i Miriam Arce, filohan'ny Fikambanana Miaro ny Fonenana sy ny Tontolo Iainana ao amin'ny Seranantsambon'i Chancay, tamin'ny Global Voices.
“Teo amin'ny tantaran'i Pero, nipetraka teny amin'izay rehetra tiany ireo fampiasàmbola, rehefa hoe mitondra vola, ary ny fanjakana sy ny governemanta no mamela izany hitranga,” hoy i Arce nanohy. Efa hatramin'ny 2008 izy no nanohitra ireo tetikasa fanitarana ny seranantsambo.
“Faritra be mponina io, manana ny tantarantsika isika, ny hamaroam-piainana tokamiavaka, ary ny olona sasany dia mivelona amin'ny indostrian'ny fizahantany. Raha mitohy ilay tetikasa, hiova mandrakizay ny zavatra rehetra, ary tsy ho tafaverintsika velively intsony io,” hoy izy.
Vinavinai'n'ilay tetikasa ho ahetry ihany koa ilay havoana Cerro Cascajo eo akaiky eo, miala avy amin'ny 80 ho lasa 4 metatra. “Fanamarinana ataon-dry zareo ny hoe halefaka kokoa ny feo sy ny vovoka misidina mandritra ilay fampihetrena ny haavony. Fa manao ahoana ny amin'ireo olona miaina eo ambonin'ilay havoana?” hoy i Williams Jurado, filohan'ny Kaomity Fanarahamaso ny Faritra Mandon'i Santa Rosa ao Chancay, nanontany  an'ireo media ao an-toerana. “Manana (maherin'ny fianakavian 50) monina ao isika.”
Mandritra izany fotoana izany, mba handinihana ny tranga momba azy ireo dia tohizan'ireo mponina, ireo mpikatroka, ary ireo fikambanana ao an-toerana ny fanaovana fihaonana virtoaly miaraka amin'ireo manampahefana.
Nanomboka tranonkala i Miriam Arce sy ireo namany hafa, ao amin'ny tambajotra Facebook (ChancaySostenible  sy Coordinadora en defensa de los intereses de Chancay ), ka antenainy ny hahazo fanohanana bebe kokoa amin'ny fanafoanana ilay fanapahankevitry ny governemanta hanome alàlana ny fanitarana ilay tetikasa toeram-pitodiana ao amin'ny seranantsambon'i Chancay amin'ny Aprily. Amin'ny fampitambarany ny hery amin'ireo fikambanana hafa, nifandray tamin'ireo mpikambana hafa ao amin'ny kaongresy i Arce, saingy mbola vitsy ihany aloha no azo hatreto.
Sarin'ny hetsipanoherana iray tamin'ny 2019, an'i Miriam Arce, fampiasàna nahazoana alàlana
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/03/19/151763/
 dia nilaza fa: https://gestion.pe/economia/empresas/cosco-shipping-volcan-invertiran-us-3-000-millones-construir-puerto-chancay-256532-noticia/?ref=gesr.
 Xinhua : http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/25/c_137773672.htm
 China Daily: https://www.chinadaily.com.cn/a/201901/25/WS5c4a6594a3106c65c34e6744.html
 seranana salantsalany izany: https://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/top-50-world-container-ports
 manankarena amin'ny hamaroam-piainana: https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/
 fanamarihana 50: http://derechoshumanos.pe/wp-content/uploads/2020/08/OBSERVACIONES_MEIA_Chancay.pdf
 Coordinadora en defensa de los intereses de Chancay: https://www.facebook.com/Coordinadora-en-defensa-de-los-intereses-de-Chancay-Huaral-1861969510761438/